तपाईंको बैंक अकाउण्टको पैसा चोरियो भने ? ह्याकरबाट बच्ने यी हुन् १० उपाय
काठमाण्डौ । जारी वर्षको मे १५ को बिहानीपख अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरको गिरोहले जापानजस्तो समृद्ध र प्रविधिले सुसज्जित देशका विभिन्न १६ शहरका १४ सय एटीएम काउण्टरबाट २ घण्टाको अवधिमा नक्कली क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी १४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम चोरी गरेपछि अहिले हंगामा मच्चिएको छ । सन् २०१२ देखि २०१३ सम्मको अवधिमा समेत ह्याकरहरुले यसैगरी...
एप्पल आइफोनको मूल्य घट्ने !
काठमाण्डौ । एप्पलको आइफोन बोक्नु शानको बिषय बन्ने गरेको छ । नेपालमै पनि मध्यम तथा उच्च वर्गका सदस्यहरु एप्पलको आइफोन प्रयोग गर्न औधी रुचाउँछन् । तर यसको मूल्य निकै उच्च छ । आइफोनको मूल्य साबिकको तुलनामा घट्ने संभावना छ कि छैन होला त ? यदि यस्तै सोचिरहनुभएको छ भने अब एप्पलले आफ्नो आइफोनको मूल्य घटाउने भएको छ । एप्पल कम्पनी पछिल्लो कालमा...
अब नेपालमा पनि भाइबरको पब्लिक च्याट !
काठमाण्डौ । विश्वभर ७११ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको विश्वकै अग्रणी मेसेजिङ एप भाइबरले नेपालमा पनि पब्लिक च्याट सुरु गरेको छ । ‘भाइबर पब्लिक च्याट’ यस्तो मोबाइल प्लाटफर्म हो, जसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सेलिब्रिटी, विभिन्न व्यक्तित्व तथा ब्राण्डलाई फलो गर्न सहज बनाउँछ । यस पब्लिक च्याटमा टेक्स्ट, फोटो, अडियो, भिडियो, स्टिकर, वेब...
फेसबुकको सबैभन्दा लोकप्रिय अंगमध्ये एउटा हो– मेसेन्जर। एन्ड्रोइड तथा आइओएस एपका लागि फेसबुक मेसेन्जर एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ। यो अपडेटपछि अब तपाइँले मेसेन्जरबाट ग्रुप फोन गर्नसक्नुहुन्छ। तपाइँको स्मार्टफोनमा यो नयाँ अपडेटको नोटिफिकेसन म्यासेन्जरले देखाइसकेको हुनुपर्छ। नदेखाएको भए छिटै देखाउनेछ। अपडेटपछि मेसेन्जरमा तपाइँले...
टेलिकमले सार्वजनिक गर्यो सुधारका मार्गचित्र, ‘मोवाइल मनी’देखि चीनतर्फ अप्टिकल फाइबरसम्म
काठमाण्डौ । सबैभन्दा बढी सरकारको शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेड(नेपाल टेलिकम)ले लामो समयको तयारीपछि बजेट अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै ‘सुधारको मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार भद्रकालीस्थित कम्पनीको मुख्य कार्यालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले ‘मोवाइल मनी...
धौलागिरी क्षेत्रमा टेलिकमको थ्रीजी सेवा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत धौलागिरी अञ्चलको विभिन्न स्थानमा जिएसएम प्रविधिको थ्रीजी मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । धौलागिरी अञ्चलको विभिन्न स्थानमा १६ वटा बिटिएस सञ्चालनमा रहेकोमा थप ५ वटा स्थानमा नयाँ बिटिएस जडान गरी हाल २१ स्थानबाट जिएसएम प्रविधिको थप गुणस्तरीय थ्रीजी मोबाइल सेवा...
नयाँ वर्षमा टेलिकमको अफर, म्यासेज गर्दा ५० प्रतिशत छुट, ५० रुपैयाँ १ सय एमबीको डाटा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा कम्पनीबाट संचालित विभिन्न सेवाहरुमा छुटको अफर सार्वजनिक गरेको छ । जिएसएम तथा सीडीएमए मोवाइल सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएसको महसुल दरमा चैत ३० गतदेखि बैशाख १ गतेसम्म दुई दिनका लागि विद्यमान महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ । प्रवक्ता...
‘एनटी प्रो’ सेवा लञ्च गर्दै टेलिकम
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी ‘एनटी प्रो’ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । यो सेवा प्रयोग गरी नेपाल वा विदेशबाट समेत जिएसएम नेटवर्क बाहिर भएको, तर कुनै इन्टरनेट जोनभित्र रहेको अवस्थामा आफ्नै पोस्टपेड मोबाइलमार्फत विश्वभर कल गर्न वा कल प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन । यो...
माउस खरीद गर्नुहुँदैछ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाण्डौ । टचस्क्रिनवाला सबैभन्दा ठूलो र राम्रो ट्याब्लेट होस् वा ल्यापटप, यसमा तपाईंले अधिकतर समय माउस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको काम सहज भइदिन्छ । माउस दुई खालको हुन्छ, एक : अप्टिकल र अर्को : लेजर । अप्टिलक माउस LED को प्रयोग गरिएका कारण यसले तपाईंले कम्प्युटरमा के गर्न चाहिरहनुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्दछ । यसको तुलनामा लेजर माउस...
परमारलाई आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड
काठमाण्डौ । बंगलादेशको सीटीओ फोरम र भारतको इन्फोकम इण्डियाले बंगलादेशमा आयोजना गरेको टेक समिट २०१६ मा नेपालका प्रमोदकुमार परमार ‘आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०१६’ बाट पुरस्कृत भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि(आईसीटी) बिज्ञलाई उनीहरुले गरेको योगदानको आधारमा सो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा उनीहरुले...
यसरी जोगाउनुस् मोवाइलको ब्याट्री
एजेन्सी । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता धेरैको एउटै गुनासो हुन्छ, मोवाइलको ब्याट्री दिनभरि समेत टिक्दैन । तर आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने तरिकामा केही परिवर्तन गरे चाँडै व्याट्री सकिने समस्याबाट तपाईंले सहजै मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ । स्मार्टफोनमा तपाईले जे डाटा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई विज्ञापन दिने कम्पनीले पनि चूपचाप प्रयोग...
हेलिकोप्टर भन्दा महङ्गो मोवाइल ! यस्ता छन् विश्वका ५ महङ्गा मोवाइल(फोटोसहित)
एजेन्सी । तपाईले कहिल्यै एउटा मोवाइल सेट हेलिकोप्टर भन्दा महंगो होला भनेर सोच्नुभएको छ ? सायद छैन होला । तर विश्वमा यति धेरै महंगा मोवाइल पनि छन्, जसलाई खरीद गर्नु मोवाइल सौखिनहरुको बसमा हुन्न । विश्वकै सबैभन्दा महंगो मोवाइलको मूल्य अमेरिकामा हेलिकोप्टरको उत्पादन गर्ने कम्पनी ‘बेल’को कयौं हेलिकोप्टरको मूल्य भन्दा ज्यादा छ । द...
यूइएबाट नेपाल फोन गर्दा यस्तो अफर
काठमाण्डौ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको Etisalat कम्पनीको मोबाइलबाट नेपाल टेलिकमद्वारा बितरित कुनै पनि टेलिफोन नम्बरमा प्रचलित दररेट भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो दरमा कल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै अब Etisalat कम्पनीको मोबाइलबाट नेपाल टेलिकमद्वारा वितरित कुनै पनि टेलिफोन नम्बरमा कल गर्दा प्रतिमिनेट ३० फिल्स अर्थात करिब ८ रुपैयाँ ८०...
विमानस्थलमै पर्यटकलाई टेलिकमको निःशुल्क सिम !
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले बुधबारदेखि विदेशी पर्यटकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षबाटै निःशुल्क रुपमा सिम वितरण कार्य सुरु गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार थपलियाले निःशुल्क सिम बितरण...
चिनियाँ स्मार्टफोन 'साओमी' मार्चभित्र नेपालमा
काठमाण्डौ । स्मार्टफोनहरुको भीडमा चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी साओमीका उत्पादन पनि भित्रिइने भएको छ । नेपालकै प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह सारदा ग्रुपले साओमीका उत्कृष्ट उत्पादनलाई नेपाल भित्र्याउन लागेको हो । साओमी सस्तो मूल्यमा उत्कृष्ट र गुणस्तरीय स्मार्टफोन बिक्री गरी विश्वभरि नै परिचित चिनियाँ कम्पनी हो । चीनमा ठूलो बजार...